HD vidiyo kwencazelo high okuqoshiwe nge isixazululo ephakeme ukwedlula standard. Kulokhu, akukho incazelo ecacile mayelana HD. Uyini isinqumo oluhambisana ke, kuncike esifundeni. Ngokwesibonelo, e -Nyakatfo Melika Nobe ngokwesiko noma iyiphi ividiyo equkethe angaphezu kwe-480 imigqa ovundlile, kwakubhekwa njengento ephezulu definition ukurekhoda. EYurophu lehla ngokushesha inani kumelwe ukuba abangaphezu kuka-570 amayunithi ezinjalo. Kodwa, muva nje, lezi zibalo siphakeme kakhulu kunalokhu.
Ukuqopha nge-HD isixazululo, kungase kudingeke emithonjeni ehlukene: phansi, noma ngqo ukusakaza satellite, digital cable TV, akwazi ukugcina (CD), ama-digital khamera, okuqukethwe Inthanethi, futhi isizukulwane yakamuva amageyimu. amakhompyutha Eziningi ziyakwazi ukudlala ividiyo VGA ubuchwepheshe, DVI kanye / noma yocezuningi.
Optical ejwayelekile Blu-Ray disc ungahlinzekela isikhala esanele ukugcina amahora amaningana ephezulu definition ukurekhoda. Digital Anhlobonhlobo kanye DVD (nge 4.7 GB noma 8.5 GB ukurekhoda kabili emaceleni) is best kudlalwa ezikrinini ukuthi kukhona ezincane kuno-36 amayintshi (91 cm), ngoba abakwazi ngokuvamile ukusekela ephakeme isixazululo HD (amazinga okuzenzakalelayo lanamuhla) .
Kuye bandwidth iyatholakala futhi isibalo izingxenye format eliphezulu ukudluliselwa vidiyo noma 720p / 24 ngesekhondi, noma 1080 p / 24. Amanye amazwe nezinye amazinga - lisetshenziswe kweyesi-25 noma ngisho 30 ngesekhondi. Ngaphambili, lapho usebenzisa isiqophi opholile isicelo 480 noma 576 pixels. Lamarekhodi iguqulwe ibe format 720 p, kodwa lokhu kungase kubangele ukuba sisibheke ukufomatha isithombe noma zidinga zokuhlunga empeleni okuhlale kukhona kunciphisa izinga isignali okukhiphayo. Isiqophi format HDTV seluvele HD-isinqumo 720 noma 1080 k.
Ukulandela imingcele jikelele, ifomethi 720 kuyinto esinembile futhi okusheshayo, ngoba uma ukudlala ozimele kancane kancane ukulayishwa. Standard 1080, ngokuphambene, isebenzisa ukuskena ebhangqanisiwe futhi ngaleyo ndlela kunganciphisa ijubane ulayishe ividiyo. Ngenxa yalesi sizathu, isinqumo 720 p, ngokuvamile isetshenziswe ukulanda amavidiyo kusuka ku-intanethi noma ukubukwa kuwebhu, 1080 p - I- disc esivuthayo ku-Blu-Ray ubuchwepheshe.
Inombolo yokusakaza ividiyo ahlinzekwa wokubuka intanethi noma ukulandwa ku-intanethi, sikhulela nsuku zonke. Naphezu kweqiniso lokuthi la mafayela Kunconywa njengoba ephezulu definition ukurekhoda, awukwazi baphikisa ngokuthi babe HD-isixazululo. Ngenxa enamandla kokucindezelwa nesithombe ngokuningiliziwe ezivezwa nalezi zakhiwo, izinga yabo ingaphansi kakhulu futhi ngokuvamile kunabayeni DVD-Video.
Ngaphezu kwalokho, inani elandayo labantu base abakhiqizi zinikeza imikhiqizo okuqapha ngevidiyo ukuqoshwa High Definition. Kulokhu, lo HD zokulungiswa kuyadingeka ngoba umcimbi eqoshiwe ikhamera yevidiyo kwezinye izimo badlala indima ebalulekile. Lokhu ubuchwepheshe kuqinisekisa umbala ofanele futhi lozimele. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi lezi amavidiyo adinga kuyasifanelekela yokubeka.
Namuhla, nakweminye yemidlalo ukusekela umdlalo ne isithombe 1080 k. Lokhu kungenzeka ngokushesha esikalini omuhle. Ngaphezu kokwenza ngcono ikhwalithi okubonakalayo umdlalo, abasebenzisi abakwazi ulayishe noma badlulisele HD-movie namavidyo kliphu nge-PlayStation Network. PlayStation 3 Ungakwazi futhi ukudlala emuva Blu-Ray, hD-aqukethe idatha.
"Valiwe. IPhone Xhuma iTunes" - indlela ukuvula kanjani? Kukhona isixazululo!
Umugqa emngceleni ne Lithuania: Amathiphu PPC unqobe ngokushesha